बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्र हुँदैन : भिम रावल ! - PUBLICAAWAJ
बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्र हुँदैन : भिम रावल !
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०७, २०७६११:११ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, सोमबार रिपोर्टस क्लब नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले बालुवाटारको जग्गाको साथ साथै देशभरका हिनामिना भएका सार्वजनिक जग्गाको निष्पक्ष छानबिनको नाग राखेका छन् ।
साथै उनले आफु गृहमन्त्री ब हेका बेलामा यस बारे कुनै पनि प्रकारको औपचारिक प्रस्ताव र छलफल नभएको स्क़मेत स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएका बालुवाटार जग्गाको पनि छानबिन गरि दोषीलाई कारवाही गर्न माग राखेका हुन् ।
सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको भएता पनि जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्र नहुने दोषीलाई कारवाही पनि गरिनु पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘ बालुवाटार जस्तो संवेदनशील स्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानु आपत्तिजनक छ । सत्य–तथ्य पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अब सरकारको छानविनको निष्कर्ष पर्खाैँ । ‘
त्यसैगरी पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक हरेक ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको बताउँदै उनले पार्टी विधान अनुसार चल्न नसकेको गुनासो समेत गरेका छन् ।
सरकारका कार्य जन अपेक्षानुसार नभएको बेलामा यसो नगर्दा सरकारको कामको समिक्षा हुन नसकेकोमा पनि उनले आफ्नो दुखेसो पोखेका छन् । ।
“एमसिसी पारित गर्नुपर्छ , अब ढिला गर्नु हुँदैन”- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली